Iimeko eziyimfuneko ukuze sikwazi ukuqokelela intswela ngqesho | Ezezimali
Imiqathango yokuqokelela intswela-ngqesho
Xa uphulukana nomsebenzi okanye ungaphangeli, kukho inzuzo kwezoqoqosho Injongo yabo kukukhusela abo basebenzi baphulukana nomsebenzi ngenxa yezizathu ezihlala zingaphaya kolawulo lwabo, kwimeko enjalo siza kuchaza iimeko zokuqokelela intswela-ngqesho.
Ukhuseleko kwezentlalo lukwakhusela abo bantu banesakhono kunye nomnqweno wokuqhubeka nokusebenza, kodwa abathi, ngenxa yezizathu ezingaphaya kokuthanda kwabo okanye amandla, baphulukane nomsebenzi wabo okanye babone ukuba iiyure zabo eziqhelekileyo zokusebenza zinciphile, kwaye banikwa inzuzo kwezoqoqosho, Oku kwaziwa ngokuhlangeneyo njenge "intswela-ngqesho ", exhasa ngandlela ithile, ilahleko enokwenzeka kwaye enokwenzeka kakhulu yomvuzo owawusele ufunyenwe kulo msebenzi ungaphambili.
1 Iiklasi zentswela-ngqesho esinomdla wokwazi ngazo, ngaphambi kokuqokelela intswela-ngqesho
2 Liqala nini ilungelo lokungabikho kwemisebenzi?
3 Ixesha lokugwayimba
4 Ukuqwalaselwa malunga noku.
5 Imali yesibonelelo
6 Inani elincinci lonyaka ka-2018.
7 Elona xabiso liphezulu lonyaka ka-2018.
8 Abantwana abaxhomekeke kumntu ongasebenziyo okanye ongasebenziyo.
Iiklasi zentswela-ngqesho esinomdla wokwazi ngazo, ngaphambi kokuqokelela intswela-ngqesho
Ukuba siyaya ukungabikho kwemisebenzi ezikhoyo, siya kubhekisa kwiindidi ezimbini zentswela-ngqesho esiyithi thaca apha ngezantsi:
Intswela-ngqesho iyonke. Kubandakanya imeko apho umsebenzi eyeka khona umsebenzi wakhe okwethutyana okanye kwezinye iimeko ngokuqinisekileyo, ukuze imisebenzi yakhe awayeyiphuhlisa ingasayi kwenziwa nguye kwaye umqeshwa uya kuhluthwa umvuzo wakhe okanye umvuzo okanye umvuzo. Le meko inokubangelwa kukumiswa kwe-ERE okanye ukugxothwa.
Ukungabikho kwemisebenzi. Oku kwenzeka xa umqeshwa encitshisiwe okwethutyana, iiyure zomsebenzi eziqhelekileyo zemihla ngemihla, kwaye, nomvuzo wakhe. Ukuncitshiswa kwemivuzo kunokuqondwa njengobuncinci be-10% ukuya kuthi ga kwi-70%. Kwimeko yentswela-ngqesho ngenxa yokuncitshiswa kweeyure zokusebenza.
Liqala nini ilungelo lokungabikho kwemisebenzi?
Njengemfuneko yokuba nelungelo le ukuqokelela intswela ngqesho, Kuya kufuneka ube negalelo lokungabikho kwemisebenzi ubuncinci kwisithuba seentsuku ezingama-360 ezenzeke kwisithuba seminyaka emithandathu eyandulelayo imeko eyamkelwe ngokusemthethweni njengentswela-ngqesho.
Amatyala apho isibonelelo sokuswela ingqesho sicelwa ukuba siboniswe apha ngezantsi:
Xa ubudlelwane bengqesho buphelisiwe. Xa ikhontrakthi ifikelela esiphelweni okanye kukho ukugxothwa, umqeshwa ubuphelisa ubudlelwane bakhe nenkampani kwaye umsebenzi wakhe uyayeka ukunikezelwa, ukuze ayeke ukufumana umvuzo ebecinga ngawo.
Ukunciphisa. Kungenzeka ukuba umvuzo ofunyenweyo awufani nalowo wawufunyenwe ngaphambili, kunye neeyure zomsebenzi wemihla ngemihla zinokuncitshiswa, kule meko unokucela isibonelelo sokungaphangeli.
Abasebenzi abaqhubekileyo abangasasebenziyo. Bangabaqeshwa okanye abasebenzi abenza imisebenzi engagungqiyo, ethi yona iphindaphindwe ngeentsuku ezimiselweyo, kungala maxesha okungasebenzi, apho kunokucelwa isibonelelo sokungaphangeli.
Abasebenzi okanye abasebenziKuya kufuneka benze isicelo semali mboleko yentswela-ngqesho kwisithuba seentsuku ezili-15 ukusukela oko yaqala imeko yentswela-ngqesho esemthethweni, ngaloo ndlela batyikitya ukuzibophelela kulo msebenzi.
Ukungaphangeli okanye ixesha lesibonelelo sokungaqeshwa, iqala ukusukela xa umntu ebenegalelo okungenani iintsuku ezingama-360, kungoko kuphela apho aya kuba nelungelo lokufumana isibonelelo sokungabikho kwemisebenzi kwisithuba seminyaka emithandathu edlulileyo.
Xa sithetha ngamathuba asezantsi ukuba sibe nelungelo lokufumana isibonelelo sokungaphangeli, sibhekisa ngqo kwilungelo kwisibonelelo sokungaphangeli ngokomlinganiso wegalelo okanye kwinqanaba lokunikela, ihlala iinyanga ezi-6 kwaye ifikelela kwiminyaka emibini ubuninzi, kudidi lwe Elona xesha lincinci lokufumana ilungelo kwimali mboleko yentswela-ngqesho, eli galelo lilinganiswa ngokuxhomekeka kwisithuba esichaphazelekayo, ubudlelwane kulo mbandela buboniswe ngezantsi:
Inani leentsuku onelungelo lokungaphangeli okanye lokungasebenzi. Ixesha lodweliso, elichazwe ngeentsuku.
720 2160-ukuya phambili
660 1980 - 2159 iintsuku
600 1800 - 1979 iintsuku
540 1620 - 1799 iintsuku
480 1440 - 1619 iintsuku
420 1260 - 1439 iintsuku
360 1080 - 1259 iintsuku
300 900 - 1079 iintsuku
240 720 - 899 iintsuku
180 540 - 719 iintsuku
120 360 - 539 iintsuku
Iintsuku kunye namaxesha achazwe apha anokuhluka ngokuxhomekeke kwimeko ethile, esetyenziselwa ukubhekisa kwimeko ngokubanzi.
Akukho ndlela siyicebisayo ukuba le yibhentshi ethile, esetyenziswa kuphela njengebhentshi ngokubanzi kunye noqikelelo.
Ukuqwalaselwa malunga noku.
Ixesha elicatshulweyo liya kungqinelana nexesha lexeshana, ngendlela efanayo nokusebenza nomhla wokuncitshiswa kwemihla ngemihla oza kubalwa njengosuku olunye olucatshuliweyo, oku kuya kuba nokuzimela ngokupheleleyo kumhla wokusebenza.
Kuphela amaxesha okurhweba osetyenziso olungahambelaniyo nokuqokelela intswela-ngqesho. Oku kuthetha ukuba ezo zingakhange zibalwe ukuze kuqokelelwe intswela-ngqesho aziyi kuthathelwa ngqalelo, nokuba kukwinqanaba loncedo okanye kwinqanaba lokunika inkxaso.
Amaxesha ahambelana ngqo "iholide ayonwabiswanga", iya kubalwa njengenxalenye yexesha loluhlu.
Ukuba into oyifunayo kukwazi ukungaqeshwa engqinelana nawe, kuya kufuneka ubale ukubala kwakho. Ngenxa yoku kuyakufuneka silazi igalelo lokungabikho kwemisebenzi okungxamisekileyo okuhambelana neentsuku ezili-180 ezidlulileyo kwaye sikwahlule ngo-180.
Kumrholo wakho uyakufumana "isiseko sezinto eziqhelekileyo”. Ngaphakathi kweziphumo ezenziwa sisiseko solawulo, ezo yure zexesha elongezelelekileyo azibandakanywanga kuyo.
Xa isiseko solawulo saziwa, isibonelelo sokungasebenzi siza kubalwa ngolu hlobo lulandelayo:
Kwiintsuku zokuqala eziyi-180, ngama-70%.
Emva kweentsuku ezili-180 zokuqala okanye ukusuka kumhla we-181, 50%.
Inani elincinci lonyaka ka-2018.
Nokuba imeko ithini na, imali yesibonelelo sokungaphangeli mayingabi ngaphantsi okanye ngaphantsi koku kulandelayo:
Ukuba nabaxhamli abangaphangeliyo okanye abangaqeshwanga, abantwana abaxhomekeke (nokuba kungomnye okanye nangaphezulu kwabantwana). Malunga ne-665 euro, elingana ne-107% ye-IPREM + 1/6 ye-IPREM.
Ukuba, njengomntu ongasebenziyo okanye ongasebenziyo okanye umxhamli, asinabo abantwana abaxhomekeke kuwe. Phantse i-500 euro, elingana ne-80% ye-IPREM + 1/6 ye-IPREM
Ifomula esinokuthi sizimisele ngayo ukubala oku, elilelona xabiso liphantsi lokufumana isibonelelo sokungaqeshwa, yile ilandelayo:
I-80% x (IPREM + 1/6 IPREM) okanye i-90% x (IPREM + 1/6 IPREM)
Elona xabiso liphezulu lonyaka ka-2018.
Nokuba kunjalo, ubungakanani benzuzo yokungasebenzi, akufuneki ibengaphezulu okanye ngaphezulu koku kulandelayo:
Ukuba nabaxhamli abangaphangeliyo okanye abangaphangeliyo, abaxhomekeke kubo. I-200% ye-IPREM kwimeko yokuba nomntwana omnye kuphela phantsi kolawulo lwethu, kunye ne-225% ye-IPREM ukuba kukho ngaphezulu komntwana omnye ophantsi kwethu, le kunye ne-1/6 ye-IPREM.
Ukuthatha njengomxhamli ongasebenziyo okanye ongasebenziyo, umntwana oxhomekeke kuye, elona xabiso liphezulu limalunga ne-1200 euro.
Ngabantwana ababini okanye ngaphezulu abaxhomekeke njengabaxhamliyo abangaqeshwanga okanye abangasebenziyo, elona xabiso liphezulu limalunga ne-1400 euro.
Ukuba, njengomntu ongasebenziyo okanye ongasebenziyo okanye oxhamlayo, asinabo abantwana abaxhomekeke kuwe, isixa esimalunga ne-1000 euro, elingana ne-175% ye-IPREM + 1/6 yayo.
Ifomula esinokuthi sizimisele ngayo ukubala oku, elilelona xabiso liphezulu lokungabikho kwemisebenzi okanye isibonelelo sokungaphangeli, yile ilandelayo:
I-175% x (IPREM + 1/6 IPREM) okanye i-225% x (IPREM + 1/6 IPREM)
Abantwana abaxhomekeke kumntu ongasebenziyo okanye ongasebenziyo.
Abantwana abaxhomekeke kumqeshwa ongasebenziyo kufuneka bahlangabezane neemfuno ezithile zokuqwalaselwa benjalo ngaphakathi kwesixa esiqikelelweyo. Iimfuno zoku zezi zilandelayo:
Abantwana abaxhomekekileyo abangasebenziyo okanye abangasebenziyo okanye abaxhamliyo kufuneka babe ngaphantsi kweminyaka engama-26 ubudala, banokuba badala logama nje ukukhubazeka kusekwe kwipesenti elingana okanye engaphezulu kwe-33% yamakhono abo.
Abantwana abaxhomekekileyo abangasebenziyo okanye abangaqeshwanga okanye abaxhamli kufuneka bahlale nomxhamli okanye umzuzi kufuneka abenoxanduva olusemthethweni ngenxa yesigqibo senkundla okanye ngesivumelwano sokuxhasa ngemali umntwana okanye abantwana ekuthethwa ngabo.
Abantwana abaxhomekekileyo abangasebenziyo okanye abangaphangeliyo okanye abaxhamli abanamvuzo olingana nawo, mkhulu okanye mkhulu kune-SMI.
Kuyakubaluleka ukwazi imeko yangoku yomxhamli ukuba into oyifunayo kukufuna esi sibonelelo, ukuba intswela-ngqesho ichasene nentando yakho kwaye oku kukwathetha ukuncitshiswa kweeyure zomsebenzi okanye ukuncitshiswa kwemihla yokusebenza yosuku.
Umcimbi wemali xa kuthelekiswa nokwanda kwayo okanye ukwehla kwayo kuxhomekeke kwinani labantwana okanye ukungabikho kwabantwana abaxhomekeke kumxhamli okanye abangasebenziyo okanye abangaphangeliyo, banokuphathwa ngokwahlukileyo kwiimeko ezithile, imizekelo eboniswe apha kukuqikelelwa kwaye kuphela isetyenziswe njengokwenziwa ngokubanzi kwaye ingabi sisalathiso ngqo kunye / okanye ngqo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Imiqathango yokuqokelela intswela-ngqesho